YEYINTNGE(CANADA): Sunday, June 10
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖြစ်စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိဘပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/10/20120အကြံပြုခြင်း
စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဝေဟင်မှ တွေ့မြင်ရ
“ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ သူတို့လူမျိုးတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် များနေရတာလဲ.”
ဓာတ်ပုံကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဘင်္ဂလီရွာတစ်ရွာရဲ့ ပုံပါ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခရီးထွက်ခဲ့တုန်းက နေရာအနှံ့မှာ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ ရွာတွေ ၊ ဘင်္ဂလီ လူမျိုးတွေကို တွေ့ခဲ့ရတော့ “ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ သူတို့လူမျိုးတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် များနေရတာလဲ.” လို့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေကို မေးမိတယ်။ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေက“ဟိုးအရင်ကတည်းက “လဝက” တွေကလည်း သူတို့ကို သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကို ပြန်ပို့ပါတယ်တဲ့.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူး ပြန်ပြန်ရောက်လာတယ်. ကျွန်တော်တို့ ဟိုဘက်မှာ မနေချင်ပါဘူး.. ဒီနိုင်ငံမှာဘဲ နေပါရစေ.. ဒီနိုင်ငံမှာဘဲ လုပ်ကိုင်စားတတ်ပါတယ် တဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကို သတ်ချင်လည်း သတ်ပါတော့ ၊ ကျွန်တော်တို့ ဟိုဘက်ကိုမပြန်ပါရစေနဲ့ ” လို့ သူတို့က တောင်းပန်ပြီး လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ စားသောက်ဖို့ အခွင့်အရေး အများကြီးရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဘဲ ကုတ်ကပ်ပြီး ဆက် နေခဲ့ကြတယ်လို့ ” ကျွန်မကို ပြန်ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ကလည်း တစ်ဖက်သားကို သနားတတ်၊ အားနာတတ်တဲ့ စိတ်က ရှိတော့ အဲဒီလိုနဲ့ဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဘင်္ဂလီတွေ အလွန်များပြား အင်အား ကောင်းနေခဲ့ပုံ ရပါတယ်။ လဝကရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုနဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့်လည်း အများကြီးပါမှာပါဘဲ။ ရခိုင်ပြည်နယ်သူ ပြည်နယ်သားတိုင်း ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရောက်ဖူး သူတိုင်း ဘင်္ဂလီကျေးရွာတွေ ၊ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်တောင် များတယ် ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့မှလည်း သူတို့တွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဘယ်လောက်တောင် စိမ့်ဝင်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိရပါတယ်။ ဒီတော့ ခုလို ပြဿာနာမျိုးတွေ ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ အားနာသနားတတ်မှု၊ လဝကရဲ့ အားနည်းမှုတွေကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်လာရပါပြီ။ တကယ်တမ်းမှာ ကိုယ်တွေက သူတို့နေရာဒေသကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်သူတွေ မဟုတ်ပါဘဲ ကျူးကျော်သူတွေက ပြန်ရန်ရှာပြီး အိမ်ရှင်က သူခိုးပြန်ဖြစ်ရတဲ့အချက်က ရင်နာဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြည်မှာနေပြီး ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ ဥပဒေ၊ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တစ်သားတည်း မကျတဲ့သူတွေကို နိုင်ငံသားလို့ ခေါ်ဆိုဖို့ လားလားမှ အဆင့်မရှိပါ။ နိုင်ငံသားလို့လည်း သတ်မှတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ “သူတို့ကို သတ်ချင်သတ်ပါ ၊ ဒီမှာဘဲ နေပါရစေ” လို့ တောင်းပန်တိုးလျှိုးပြီး နေခဲ့ကြသူတွေက ခုချိန်မှာ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြန်သတ်နေတာမျိုး လုံးဝ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါ။ ဒီပြဿာနာတွေ အေးဆေး သွားရင်တော့ အစိုးရက လဝကဥပဒေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကိုလည်း တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကိုင်တွယ်သင့်ပါပြီ။
(နိုင်ငံအတွင်းမှာ နိုင်ငံသားပီသစွာ နေထိုင်သူများကို မရည်ရွယ်ပါ။ နိုင်ငံတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်သော်လည်း နိုင်ငံသား မပီသသူ၊ နိုင်ငံသား များနဲ့ အေးအတူပူအမျှ မနေနိုင်ကြသူ များကိုသာ ရည်ရွယ်ပါသည်။)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/10/20123အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်အရေးအခင်းသတင်း( AL JAZEERA NEWS 10.6.2012)
Monday, 11 June 2012 02:15
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ် စဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများအား ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီက မေတ္တာရပ်ခံချက်တစ်ရပ်ကို ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းမိန့်ခွန်း အပြည့် အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူများခင်ဗျား . . .
မိဘပြည်သူများနဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ မိဘပြည်သူများ သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်နီမော် ဖြစ်စဉ် ကိုအခြေခံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေဟာ ဘာသာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအ၀င်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစည်း စည်းလုံးလုံးနဲ့သတိပြုပြီး ၀ိုင်းဝန်း ထိန်းသိမ်းစောင်ရွက်ကြရမယ့် အနေအထား ရောက်ရှိလာတာကို တွေ့ရတယ်။
ကျွန်တော်ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များကို တာဝန်ယူခဲ့ချိန်မှစတင်ပြီး မိဘပြည်သူများရဲ့ အဓိက လိုအင်ဆန္ဒနှစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တစ်နည်း အားဖြင့် ပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အဓိကထားပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ပြည်သူလူထုကို အခြေပြုတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာကို ဒုတိယအဆင့် တက်လှမ်းပြီးတော့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှေးအစဉ်အဆက်ကပင် ကွဲပြားတဲ့ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေ ရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများနဲ့ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းတဲ့ သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရလက်ထက်မှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံသားများရဲ့ မူလအခွင့်အရေးများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ခံစားရ ရှိနိုင်ကြစေရန်အတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်အသစ်ပြဋ္ဌာန်းပြီး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ မိဘပြည်သူများရဲ့အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ၊ လိုလားချက်များကို အသင့်မြတ် ဆုံးနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ခံယူထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မတည်ငြိမ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားလာတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဖြစ်ပွားသော နေရာများမှာ ချက်ချင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ အခြား ဆက်စပ် ဖြစ်ပွားနိုင်ဖွယ်ရှိသော နေရာများတွင်လည်း ဆက်စပ်ဖြစ်ပွားလာခြင်း မရှိအောင်၊ ဖြစ်ခဲ့ပါကလည်း ဖြစ်စတွင်ပင် ပြီးပြေ အေးငြိမ်းသွားအောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် စီမံမှုအတိုင်း လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်စစဉ်များနဲ့ ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု အခြေအနေများကိုလည်း မိဘပြည်သူများအား အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ချပြ အသိပေးလျက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း ဒီဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားစကပင် မိဘ ပြည်သူများထံ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားဖို့ စီစစဉ်ခဲ့သော်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ် ကျယ်ပြန့်လာခြင်း မရှိနိုင်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့အတွက် လည်းကောင်း၊ မိဘပြည်သူများ စိတ်သောက မဖြစ်စေလိုတဲ့အတွက်လည်းကောင်း ယခင်က ရှင်းလင်းပြောကြားမှု မပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ညက စစ်တွေမြို့မှာ အကြမ်းဖက်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အကြမ်းဖက်ရန် ပြင်ဆင် ကြိုးပမ်းမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ ပြန်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေများအရ မိဘပြည်သူများကပါ သိရှိပါဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်လာပြီလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ယနေ့ မိဘပြည်သူများကို ယခုလို ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်များဟာ ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေးကို အခြေခံပြီး မကျေနပ်မှု၊ မုန်းတီးမှု၊ လက်စားချေလိုမှုတွေကို ရှေ့တန်းတင် လှုံ့ဆော် ဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် မင်းမဲ့စရိုက် လုပ်ရပ်များ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားလာတာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီလို လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲတွေကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မဆုံးနိုင်တဲ့ မုန်းတီးမှုတွေ၊ လက်စားချေလိုမှုတွေနဲ့ မင်းမဲ့စရိုက်တွေကို ရှေ့တန်းတင်လျက် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်နေကြမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်သာမက ပိုမိုကျယ်ပြန့် ဖြစ်ပွားလာစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ အခြားသော အမှောင့်ပယောဂများလည်း ပါဝင်ပူးကပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုသာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အသွင်ကူးပြောင်းစသာ ရှိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တာကို မိဘပြည်သူများ အားလုံး အထူးသတိထားကြစေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေအပေါ်မှာ ဥပဒေနဲ့အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို ဒီလို ဖြစ်စစဉ် ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ နောက်ထပ် မဖြစ်ပွားရအောင်လည်း တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျစဉ်း စည်းကမ်းများနဲ့အညီ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ဒီဖြစ်စစဉ်မှာ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့သူများအတွက်လည်း တရားမျှတမှုရှိအောင် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးက သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး အစစအရာရာ နားလည်ပေးကြဖို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ရရှိအောင်လည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ထို့အတူ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူထုလူတန်းစား အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြို့မိမြို့ဖ ရပ်မိရပ်ဖ ပြည်သူများနဲ့လည်း ပူးပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး မျှော်မှန်း တည်ဆောက်နေကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစစဉ်များဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရှိမှသာ ဖော်ဆောင်အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိဘပြည်သူများ၊ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူထု လူတန်းစား အဖွဲ့အစည်း အားလုံးတို့က လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော မတည်ငြိမ်မှုများ တည်ငြိမ် အေးချမ်းသွားအောင်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့် ဖြစ်ပွားလာခြင်း မရှိအောင် သတိတရားကို အခြေခံ၊ အသိတရားနဲ့ မေတ္တာတရားကို ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ အတူ ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ဖော်ဆောင်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူများ အားလုံး ဘေးဘယာ ဝေးကွာပြီး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရနဲ့ လက်တွဲပြီး အေးချမ်းသာယာ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် ဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ http://www.news-eleven.com
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်စဉ် သတင်းများဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျာနယ်လစ်များကို ခေါ်ယူသတိပေး၊ အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ည)အရ ထောင်ဒဏ်ခုနှစ်နှစ် ကျခံရနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေ ထည့်သွင်းပြောကြား
Sunday, 10 June 2012 23:40
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်စဉ် သတင်းများ ဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသည့် အရေးယူမှုအပြင် အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၅ (ည)အရ ထောင်ဒဏ် (၇)နှစ် ကျခံရနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေက ဇွန်လ ၁၀ ရက် နေ့ ည ၇ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဂျာနယ်လစ်များကို ခေါ်ယူ သတိပေးရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
''ခေတ်တွေက ပြောင်းပြီဆိုပြီး အခုတော့ ဘာမှမပြောင်းသလိုပါပဲ။ အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဟောင်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ မရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ထုတ်ဝေနေရတဲ့ မီဒီယာတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ အခုချိန်ထိ စာပေစိစစ်ရေးက သတ်မှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေရဆဲပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အရာရာကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ် ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအချိန်မှာ ဘယ်လိုဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ ရတယ်ဆိုတာမျိုး ခေါ်ပြောတာကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မကြာခင်မှာ စာပေစိစစ်ရေးကို ဖျက်သိမ်းတော့မယ်လို့ ပြောထားတယ်။ စာပေစိစစ်ရေး ရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင် အခုလို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ခေါ်ယူသတိပေးတယ်ဆိုရင် စာပေစိစစ်ရေး မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် ဒါဟာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ တစ်ဖွဲ့ချင်းစီကသာ ဒီလိုခေါ်သတိပေးနေရင် ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ သိအောင်၊ မလိုလားအပ်တာတွေ မဖြစ်အောင် ရေးသားဖော်ပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဖြစ်စဉ်သတင်းရေးသားမှုတွေအတွက် ဂျာနယ်လစ်တွေကို ဥပဒေတွေနဲ့ ခေါ်သတိပေးတဲ့အပေါ် တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ဒါကို ကန့်ကွက်ချင်ပါတယ်''ဟု Weekly Eleven News Journal မှ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုဝေဖြိုးက ပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံ၍ သတိပေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပါပွဲသို့ တက်ရောက်သော ဂျာနယ်လစ်အချို့မှ ၀န်ကြီးချုပ်၏ ပြုမူပြောဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းအချို့ပေါ်တွင် စိတ်ပျက်ရကြောင်း၊ ပြောကြားလိုသည့် သဘောထားကို လက်ခံနိုင်သော်လည်း ယခင်အုပ်ချုပ်မှုမှ အကျင့်ဟောင်းများအတိုင်း ပြုမူဆက်ဆံသည့်အပေါ်တွင်မူ လက်ခံရန် ခက်ခဲကြောင်း The Voice Weekly Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ http://www.news-eleven.com
ယနေ့ည ၈ နာရီတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံသို့ မိန့်ခွန်းပြောမည်
ည ၇ နာရီ၊ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သည် ယနေ့ည ၈ နာရီတွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှတဆင့် ပြည်သူလူထုသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအချိန်က
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နှင့် စစ်တွေ၊ ရမ်းဗြဲ၊ ကျောက်ဖြူတို့တွင် မငြိမ်သက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ဦးသိန်းစိန် ပြည်သူလူထုသို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာသော်လည်း ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်း စစ်တွေမြို့နှင့် ရမ်းဗြဲမြို့နယ်များတွင် မငြိမ်သက်မှု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ယခုလို သမ္မတမိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု ကြေညာလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ။
Please correct spelling as ``terrorists``
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
<ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံရပ်ကွက်တွင် ဘင်္ဂါလီလူအုပ်စုနှင့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့များ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေ
by Yangon Press International on Sunday, June 10, 2012 at 1:08am ·
နံနက် ၁၁ နာရီခွဲ၊ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၂၊ YPI
ယနေ့နံနက် ၁၁နာရီရရှိသည့် သတင်းများအရ စစ်တွေမြို့မင်းဂံရပ်ကွက်တွင် နေအိမ်များ မီးရှို့ရန်ကြိ်ုးစားသည့် ဘင်္ဂါလီလူအုပ်စုနှင့် လုံထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့များ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့် နှစ်ဘက်စလုံး အကျအဆုံးရှိကြောင်း စစ်တွေမြို့ခံများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရသည်။ ယမန်နေ့ညက အခြေအနေမှာ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲ ယခုနေ့ခင်းပိုင်းအထိ အခြေအနေကို ငြိမ်သက်အောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်သေးကြောင်းလည်း မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
နတလ ကျေးရွာများဆိုသည်မှာ ဦးခင်ညွှန့်လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်နှင့် အခြားမြို့များမှ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် သွားရောက် အခြေစိုက်စေခဲ့သည့် ဗမာကျေးရွာများဖြစ်သည်။ အလယ်သံကျော်ကျေးရွာမှာ မောင်တောမြို့မှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၁ နာရီသာသာမောင်းနှင်ရသည့် အကွာအဝေးတွင်ရှိကာ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီများ၏ အလယ်သံကျော်ညီလာခံကြောင့် ထင်ရှားသည့် ကျေးရွာလည်း ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက ထိုညီလာခံမှဆုံးဖြတ် တောင်းဆိုရာတွင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနှင့် ရသေ့တောင်တို့ကို ၎င်းတို့အား အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်နှင့် စစ်တွေမြို့ကို ရခိုင်နှင့် တလှည့်စီအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
ပုဒ်မ (၁၄၄) အထုတ်ခံရသည့် မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်ရှိလာ
ရခိုင် ၄ မြို့နယ် ပုဒ်မ (၁၄၄) ထုတ်
နေ့လည် ၃ နာရီ ၅၉ မိနစ်၊ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၂ (YPI)
စစ်တွေ၊ သံတွဲ၊ ကျောက်ဖြူနှင့် ရမ်းဗြဲတို့တွင် ပုဒ်မ (၁၄၄) အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း ရုပ်မြင်သံကြားများမှ ထုတ်လွှင့်သွားသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်အပါအ၀င် ပုဒ်မ (၁၄၄) အထုတ်ခံရသည့် မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ။
By Maung Nay စုစည်းတင်ဆက်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/10/2012 1 အကြံပြုခြင်း
ကျောက်နီမော် လူသတ်၊ မုဒိမ်းမှုဦးဆောင်သူ အကျဉ်းထောင်အတွင်းအဆုံးစီရင်
on Sunday, June 10, 2012 at 6:26am ·
;ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စု သပြေချောင်းကျေးရွာနေ မသီတာထွေးအား မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု၌ ဦးဆောင်ဖြစ်သူ ထက်ထက်(ခ)ရော်ရှီးသည်ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်အတွင်းတွင် ဇွန် ၉ ရက်ည ၉ နာရီ ၃၀ခန့်က မိမိပုဆိုးဖြင့် ဆွဲကြိုးချအဆုံးစီရင်သွားကြောင်း ကျောက်ဖြူမြို့နာရေးကူညီမှုအသင်းမှသတင်းရရှိသည်။
"ဒီမနက်ပဲ ကျောက်ဖြူမြို့မသချိုင်္င်းမှာ သဂြိုဟ်လိုက်ပြီ။ သူ့လုံခြည်နဲ့သူဆွဲကြိုးချသွားတာ။ အစ္စလမ်ဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာအရ သဂြိုဟ်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက် ခုမနက်ပဲသူတို့ဘာသာဝင်တွေသဂြိုဟ်လိုက်ကြပြီ" ဟုနာရေးကူညီမှုအသင်းအတွင်းရေးမှူး ကိုမောင်မောင်အောင်က ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နှင့်အကျဉ်းထောင်သို့ဆက်သွယ်သော်လည်းပြန်လည်ဖြေကြားမှုမရှိသလို သက်ဆိုင်ရာကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေ။
စစ်တွေ သံတွဲ ရမ်းဗြဲ ကျောက်ဖြူ.. ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်လိုက်ပါပြီ
စစ်တွေ သံတွဲ ရမ်းဗြဲ ကျောက်ဖြူ.. ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်လိုက်ပါပြီ...လူစုလူဝေးမလုပ်ရ.. ၅ယောက်ထက်မပိုရပါ....
The Voice Weekly -
စစ်တွေမြို့တွင်းသို့ ကုလားခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်သည် UN အကူအညီဖြင့် ၀င်ရောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ အဆိုပါကုလားသည် မောင်တောမြို့ပြဿနာဖြစ်ပွားမှုအတွက် အဓိကအရေးကြီးတရားခံဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ သက်ဆိုင်များသို့လည်း အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူတုံ့ပြန်မှုမရှိသည့်အတွက် UN ကား အဖြူဖြင့် စစ်တွေမြို့ လမ်းမပေါ်တွင် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် မောင်းနှင်ဝင်ရောက်သွားပါသည်။ စစ်တွေမြို့နယ် ပြည်သူများသတိထားကြပါ။ "ကုလားခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာထွန်းအောင်သည် စစ်တွေမှ ရန်ကုန်သို့ သည်နေ့ ညနေ ပြန်မည်ဟု သိရပြီး သူ့အတွက် လေယဉ် နှစ်စီး စီစဉ်ထားသည်ဟုသိရသည်။
ညမထွက်ရအမိန့်ကို စစ်တွေမြို့အတွင်း လှည့်လည်ကြေညာနေသော မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကို ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ပန်းလမ်း(စစ်တွေ)
ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကရခိုင်လူမျိုးတစ်ထောင်ကျော်ခန့် ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ချီတက်
ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီက ရွှေတိဂုံဘုရား ရင်ပြင်၊ရခိုင်တန်ဆောင်းမှစပြီး ရခိုင်သံဃာတော်များနှင့် ရခိုင်လူမျိုး များ အင်အား တစ်ထောင်ကျော်ခန့် မနေ့ကကဲ့သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆုတောင်းဝတ်ပြုပွဲပြု လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ စစ်တွေမြို့ကိုကူးစက်လာတာ အပေါ် ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ပြောဆိုလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
ဇော်ဝင်း(၈၈ကျောင်းသားဟောင်း)ရဲ့“ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် ..သိန်းစိန်တာကထွက်“ဆောင်းပါးသို့ ပြန်ကြားချက်
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေရဲ့ ၀က်ဆိုဒ်ကို အမြဲတန်းအားပေးဖတ်ရှုပါတယ်။ သတင်းတွေတိကျတယ်။ ဘက်မလိုက် တန်း အမှန်တွေဖော်ပြတယ်။ ပြီးတော့ ဒေါက်တာ တစ်ဦး။သူ…ရန်ကုန်မှာ မြှားနတ်မောင်မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာဘ၀ထဲက စာပေသမားအချင်းချင်းမို့ လေးစားခင်မင်ခဲ့မိတယ်။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ လုပ်သမျှအလုပ်၊ ပြောသမျှအပြောတွေဟာ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်လို့ပဲ သိမြင်ထားတာမို့ အစဉ်အမြဲအားပေးခဲ့မိပါတယ်။ သူတကာတွေ ဗမာပြည်ပြန်လာတာ တောင် ခုချိန်ထိပြန်မလာသေးတာကိုကြည့်ပြီး နားမလည်အောင်ဖြစ်မိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီအချိန်၊ဒီအခါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခေတ်လို့ပြောလို့ရနေတဲ့ အနေအထားမှာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေပြန်လာသင့်ပြီပေါ့..ဒါက ကျွန်တော်အတွေးပါ။ ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာကတော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဟာ ဘယ်အစိုးရတက်တက်မကောင်း ကြောင်းပဲ ပြောတော့မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပြီး ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး…။
အခုတော့ ကျွန်တော့်အတွေးတွေ မှန်နေပြီလားလို့ သက်သေပြနိုင်တဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုသူ့ဝက်ဆိုဒ်မှာတင် လာတယ်။ ဇော်ဝင်း(၈၈ကျောင်းသားဟောင်း)ရဲ့ ဆောင်းပါးပါပဲ။ ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူဟာ အစိုးရမကောင်းကြောင်းပြော ချင်တာနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာ အစိုးရကလှုံ့ဆော်လို့ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ဖော်ပြ ထားပြီး ကုလားတွေဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဝင်းဆိုတာ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် မူဆလင်ကုလားတစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ရေးသူဟာ ဗမာတစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးမရေးပါဘူး။ ကိုယ့် ဗမာလူမျိုး(ရခိုင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်)ကို ကုလား(၃)ယောက်က လူစိတ်ကင်းမဲ့စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့တာကို ရင်ထဲမှာ မနာ နိုင်ပဲ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အဖြစ်မှန်မဟုတ်သလိုလို၊ ပုံကြီးချဲ့သလိုလိုမျိုး …ရေးထားပါတယ်။
သတ်တဲ့သူတွေကို ဘဂါင်္လီလို့ကြေညာတာ အမှားတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်တွင်းမှာရှိပြီးသား မူဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ရောထွေးမှာစိုးလို့ ခွဲခြားဖော်ပြပေးတာပါ။ ရေးတဲ့သူရဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ သူရေးသားတပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ပိုင်းကိုကြည့်တာလဲ သိသာပါတယ်။ ဇော်ဝင်းဟာ အစိုးရအပေါ် ဘယ်လိုအပုတ်ချရေးသားရမလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်၊အတွေး၊အမြင်တွေ သူ့ဆောင်းပါးရဲ့ထိပ်စီးမှာသုံးထားတာကိုကြည့်ပါ။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အမည်ကို ဦး မပါ မစ္စတာ မပါဘဲ သုံးထားတာကိုက ဇော်ဝင်းရဲ့သဘောထားကို ဟင်းလင်းကြီး ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါကိုဖတ်ရတဲ့ ဗမာတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ။
ဆောင်းပါးရှင် ဇော်ဝင်းနဲ့ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေတို့က ကုလားတွေဘက်ကတော့ နာကြတယ်။ မြန်မာတွေ ဘက်ကတော့ လုံးဝနာတတ်တဲ့စိတ် မရှိဘူး။ ဦးသိန်းစိန်ကို သိန်းစိန်လို့ သုံးလိုက်တာ ဗမာတွေကို စော်ကားတာပဲပေါ့။ ဗမာယဉ်ကျေးမှုမှာ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့သူကို ဦး/ဒေါ်တပ်ပြီးခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမခေါ်ကထဲက ရေးသူရောပို့စ် တင်သူရောဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့်လဲသူတို့တွေ ကုလားတွေဘက်ကနာနေတာပေါ့။ ဒီဆောင်းပါး ကိုဖတ်ပြီးသူတိုင်းက ကျွန်တော့်လိုပဲ ခံစားရပါတယ်။
အခုလိုမျိုးအရေးအခင်းတွေဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်တာ အစိုးရလဲမဟုတ်သလို၊ ဗမာလူထုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် အဖြစ်မှန်က ရခိုင်အမျိုးသမီးကိုမုဒိန်းကျင့်၊ လူသတ်၊ ပစ္စည်းယူတဲ့ လူမဆန်တဲ့ ကုလား(၃)ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေစတဲ့မီးပွားပါ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမှာစိုးလို့ အစိုးရဘက်က သတင်းကို ချက်ချင်းမဖော်ပြဘဲထားတာကျတော့ အချိန်မီသတင်းမဖော်ပြလို့ ဖြစ်ရတာလို့ အစိုးရကို အပြစ်ပြောပြန်ရော။ ပြောပါ..ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေရော၊ ဘယ်သူမဆို အစိုးရကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ မကောင်းဘူးပြောလဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စမျိုးမှာတော့ ကုလား တွေဘက်ကဘက်က မရပ်တည်ပါနဲ့။ ကမ္ဘာမှာ ရိုဟင်ဂျာကုလားကို လက်ခံမယ့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှမရှိပါဘူး။ ထိုင်း နိုင်ငံမှာဆို ဘဂါင်္လီတွေကို ပင်လယ်ထဲမှာပဲ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပစ်သတ်ခဲ့တာ လူကြီးမင်းတို့ အသိပါပဲ။
ကျွန်တော်ကဒီစာကို ရေးနေရင်းနဲ့ သဘောကျတာလေးတစ်ခုကိုတော့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဇော်ဝင်းဟာ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်းဆိုတာ အရှက်မရှိနာမည်တပ်ထားပြီး ကုလားတွေဘက်က လိုက်ရေးတယ်။ ၈၈ကျောင်းသား ကိုကိုကြီးရဲ့သဘောထားကို ဇော်ဝင်းသိအောင်ပြောပါဦးမယ်။ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံဟု ၈၈ ကျောင်းသားများပြောဆိုပြီး ကိုကိုကြီးရဲ့သဘောထားကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဧရာဝတီဝက်ဆိုဒ်မှာဖတ်ကြည့်ပါ။ အမျိုးကို ထိရင် မချိအောင်နာတတ်တဲ့ ကိုကိုကြီးကို လေးစားပါတယ်။
အခုကြည့် မီးပွားကို ငြိမ်းအောင်မလုပ်ကြပဲ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်လိုတာတစ်ခုထဲနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ မျက်နှာကို မထောက် ကုလားဘက်ကမရပ်တည်ပါနဲ့။ အစိုးရက လမ်းကြောင်းလွှဲတာ၊ ဆူဆူပူပူဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာ ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်မျိုးနဲ့ အစိုးရအပေါ်ပုံမချပါနဲ့။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပီပီ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြဖို့ပြောတာတောင် မလိုက်နာပဲ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှာရှိတဲ့ကုလားတွေက မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကား နေတာ..အဖြစ်မှန် မဟုတ်ဘူးလား။ ရခိုင်တွေ ထွက်ပြေးနေရတာ၊ ခံနေရတာကို ဇော်ဝင်း(၈၈ကျောင်းသား)က ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေ တာလား။ ကိုယ့်ပြည်မှာလဲ လာနေ သေးတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို စော်ကားနေသေးတယ်။ ဒါကို အစိုးရကလှုံ့ဆော်လို့ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုးနဲ့ မလှည့်စားလိုက်ပါနဲ့။
ဖော်ပြပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေကိုလဲပြောပါရစေ။ ကိုလွဏ်းဆွေ အရည်အချင်းက ဒေါက်တာ ဘွဲ့ရတာ ကော ဟုတ်ရဲ့လား။ ခံနေရတာက ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေလေ၊ စော်ကားနေတာက ရေမျောကမ်းတင် ကုလားတွေလေ။ နာရင်းနာ..ဘယ်ဘက်ကနာမှာလဲ။ ကိုလွဏ်းဆွေမှာ ပညာတတ်ဒေါက်တာဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်အစစ်အမှန်ကလေး တောင်မရှိတော့ဘူးလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုလွဏ်းဆွေ ။ ဇော်ဝင်း(၈၈ကျောင်းသား)ရဲ့ အတွေးအခေါ်မမှန်တဲ့ဆောင်းပါးမျိုးတွေ မတင်ပါနဲ့။
စစ်တွေမြို့၏ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ မြင်ကွင်းများ
နောက်ဆုံးရ စစ်တွေ သတင်းများ-
By : Hmuu Zaw
မင်းဂံမှာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ နေအိမ်များအား စွန့်ခွာနေပြီ...
9-6-2012 မနက် 63း0 အချိန်တွင် သတင်းရယူချက်၊ မင်းဂံအကွက်(၁)နောက်ဘက်ရှိ ကုလားရွာများမီးလောင်နေ (ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ခြင်းဟု သတင်းရ)၊ မင်းဂံမှ မိန်းမ ၊ ကလေးနှင့် လူအိုများအားကို ဘေးကင်းရာသို့ရွှေပြောင်းနေ..... လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ ချပေးထားသော်လည်း အင်အားနည်းပါးသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည် (ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူဆောင်ထားသဖြင့် သတင်းမှာ မှန်ကုန်မှုရှိပါသည်)
By: D-nwe Oo
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
r ( ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံသို့ 
နေပြည်တော်အစိုးရ၀ပ်ဆိုက်တွင် ဖေါ်ပြထားသော သမ္မတထံသို့ပေးပို နိုင်သည့်
ကွက်လပ်တွင် ရေးသားပေးပို့ လိုက်သောစာ )
နေ့ စွဲ - ၉-၆-၂၀၁၂
အကြောင်းအရာ ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တွင် မာရှယ်လော
လေးစားစွာဖြင့် ၊ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ တွင်
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်လူမျိုးများမှာ ယခုအချိန်တွင် သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လီလူမျိုးများ၏
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးရို့ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊
အကြမ်းဖက်မှုများစွာကို စိုးရိမ်ထိပ်လန့် စွာ ထိတွေ့ တွေ့ ကြုံနေရပါသည် ။
ယခုအချိန်တွင် အခြေအနေအရပ်ရပ်များ မဆိုးရွားခင် ပုဒ်မ-၁၄၄-
စသောအမိန့် များ ၊ မာရှယ်လောများဖြင့်
သမ္မတကြီးမှ အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်မိန့် ကို ချမှတ်ပေးစေလိုပါသည် ။
မောင်တောမြို့ နယ်နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်များတွင်
ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- အမိန့် များကို ထုတ်ပြန်ပြီး
ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းကိုယ်တိုင် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ
ထို့ ကြောင့် စစ်တွေမြို့ တွင်
ချက်ချင်း မာရှယ်လောအမိန့် ကို ထုတ်ပြန်ပေးမှသာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်
နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ သည်
ဤအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေသော သမိုင်းလိမ်လူမျိုးများ အကြောင်းကို တိတိကျကျ
သိရှိကြသူများဖြစ်ပါသည် ။ သမ္မတကြီးနှင့်
မဟုတ်ကြောင်းနှင့် (၁၃၅ ) မျိုးစုနွယ်တွင် မပါဝင်ကြောင်းကို ကြေညာ
လက်ခံထားသူများဖြစ်ပါသည် ။ သမိုင်းလိမ်ဘ၈င်္လိမ်လူမျိုးများ၏ ယခုအကြမ်းဖက်
လုပ်ရပ်များသည် ဘာသာရေးပဋိပက္ခလည်းမဟုတ် -
လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခလည်း မဟုတ်ဘဲ သူတို့ ၏
လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဖြစ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာကို
မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို တင်ပြနိုင်အောင် ကြိုတင်
ကြံစည်မှုများဖြင့် ဆောင်၇ွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
သူတို့ ၏ လှုပ်ရှားမှုများမှာ အကြမ်းဖက် အုပ်စုဖြစ်သော အယ်လကိုင်းဒါး၏
ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကျွန်တော်တို့ မှ
စာရွက်စာတမ်းများကို ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ထို့ ကြောင့် စစ်တွေမြို့ 
နယ် ၊ မောင်တောမြို့ နယ် ၊ ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ် ၊ မြောက်ဦး
မြို့ နယ် လက်မကျေးရွာ များ၏
ဖြစ်ပျက်နေမှုများမှာ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ထားသူများ၏
လက်ချက်များဖြစ်ကြောင်း သိသာနိုင်ပါသည် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်
အိုးအိမ်တို့ ကို စောင့်ရှောက်စေရန် အလို့ ငှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်
မာရှယ်လောအမိန့် များ၊ ပုဒ်မ္မ-၁၄၄- အမိန့် များကို အမြန်ဆုံး
ထုတ်ပြန်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
သွေးထွက်သံယိုမှုများ နှင့် အကြမ်းဖက်ခြင်များ မဖြစ်ပေါ်စေရအောင် ကြိုတင်
တားဆီးမိန့် များကို ထုတ်ပြန်ထားမှသာလျှင်
ချမ်းသာရာ ရကြမည့်အကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ရပါသည် ။
-ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည် ။
စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဝေဟင်မှေ...
“ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ သူတို့လူမျိုးတွေ ဘာဖြစ်လို့ ...
ယနေ့ည ၈ နာရီတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန် နိုင်ငံသို့ မိန်...
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီး၏ ...
ကျောက်နီမော် လူသတ်၊ မုဒိမ်းမှုဦးဆောင်သူ အကျဉ်းထောင...
စစ်တွေ သံတွဲ ရမ်းဗြဲ ကျောက်ဖြူ.. ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ...
ဒီနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီကရခိုင်လူမျိုးတစ်ထောင်ကျော်ခန်...
မင်းဂံမှာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ နေအိမ်များအား စွန့်ခွာ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မာရှယ်ေ...